အိပ်ခန်းပရိဘောဂသားရေချိန်ညှိသိုလှောင်မှု function ကိုအိပ်ရာ – Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
အမရေိစတိုင် Multi-function ကိုသားရေအိပ်ရာ. 90ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်ချိန်ညှိ headrest ကွဲပြားခြားနားသောလူများ၏လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း. ကြီးမားသောသိုလှောင်မှုနေရာပေးသော function bed ကိုတက်ပါ. အရည်အသွေးမြင့်သစ်သားပြားသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကောင်းဆုံးကူညီနိုင်သည်. Baotian မွေ့ယာဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်အိပ်ပျော်သွားနိုင်သည်.
ပစ္စည်း: အထည်; အမြှုပ်; Metal support; Wooden slat and legs
ထုတ်ကုန်အမည်: အိပ်ရာ; Leather bed; adjustable beds; bed base
function ကို: Adjustable headrest; storage bed
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): Single; Full; Queen; King
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): Total4PCS